बडा दानियललाई सम्झना गर्दे - मेरो छोटो अनुभव – EL-Shaddai Family
Home Daniel Rai बडा दानियललाई सम्झना गर्दे – मेरो छोटो अनुभव
बडा दानियललाई सम्झना गर्दे – मेरो छोटो अनुभव
१० अकटाेबर २०१६ Read In English About Daniel Rai
हिब्रू १३ : ७
आफ्‍ना अगुवाहरूको सम्‍झना राख, जसले परमेश्‍वरको वचन तिमीहरूलाई सुनाए। तिनीहरूका जीवनको परिणामलाई ध्‍यान देओ, र तिनीहरूका विश्‍वासको अनुकरण गर।
हुन त, दानियल बडासगँ मेराे कहिले पनि ब्यक्तिगत भेट् भएकाे थिएन । पवित्र महा सभा र कालेम्पोङ्ग युथ क्याम्प सेवा जादाँ देख्न पाउँथे । म साधारण जवान केटा र घर देखि टाढा बस्थे । जब मैले दानिएल बडा प्रभुमा सुत्नु भएकाे खबर थाहा पाँए । मेरो हृदय रोएको झैं भयाे, र त्येस रात निदाउँनु पनि सकिन । अनि मलाई महसुस भयो, उहाँले मेरो जीवनमा पनि केहि गुण लाउनु भएको छ । जब जब उहाँले दिएकाे प्रभुको वचन र शिक्षा सुन्थे, केही उर्जा, प्रभुमा बढने बल, प्रेरणा पाउँथे। यो अनुभव हामी सबैलाई होला, आज हाम्रो बीच बाट केही बहुमुल्य थोक घुमाई पठाइएको झै लाग्छ ।
वैदेशिक रोजगारको क्रममा २ साल (२०१५-२०१७) साउदी अरबमा थिए जहाँ सेवा सङ्गती गर्ने मिल्दैन – पाईनदैन थियाे । खुलम – खुला बाईबल बोक्न पढ्न नपाईने भएकोले र साउदी एअरपोर्टमा जाँच हुन्छ भन्ने डरले बाईबलको सट्टामा सियोनको गीत भजन किताब मात्रै मैले लगेको थिए ।
परदेशको २ साल सङ्गति बिहिन बसाईमा उहाँले दिएको प्रभुको वचन मोबाईल बाट, Youtube मा हेर्न र सुन्ने गर्थे । उहाँले प्रभुको वचन दिनु हुँदा –
मैले केही प्रभुको गुण उहाँमा भएको थाहा गरे, जसले मेरो अत्मालाई स्पर्श गरौउँथ्यो – यसैबाट म प्रेरित बन्न पुगे ।
१) हामी प्रत्येकको अत्मालाई ख्याल् गरि उहाँ चिन्तित बन्नु हुन्थ्यो । पनियल विशेष अात्मिक सेवा, पोखरामा दिनुभएको अाधार वचनमा रहेर ´के हामी तयार छौँ ?` उहाँले भन्नू हुन्छ, प्रभुको नं. १ चेला पत्रुस, यहुन्ना अादि चेलाहरू त तयार छैन भने प्रभुको आगमनमा उठाईन्दैन भने हामी त के हाे र ? यी चेलाहरू दिन रात प्रभुका साथ हिंड्थें । प्रभुले आफ्ने प्रिय चेलाहरुलाई यस वचन भन्नुहुन्छ – ´प्रभुकाे अागमनमा के हामी सबै उठाईन याेग्यकन छाैं त? यसकारण तिमीहरु पनि तयार बस भन्नू भएको छ ।`(मत्ती २४ : ४४) यसकारणको अर्थले ´निश्चित हो पनि भन्दैन` अथवा ´होईन पनि जनाउदैन` कुनै निश्चिति भन्न सकिनदैन ।
लो भन्नुहोस त भाईबहिनि, के हामी तयार छौं , प्रभुको आगमनमा उठाईनलाई ?
२) वचनको मुख्य पदलाई टिप्पणी गर्दै उदाहरण दिई त्यसको गहिरो भेद बुझाउनु सक्नु हुन्थ्यो जसरी प्रभुले चेलाहरु र भिडसगँ दृष्‍टान्‍तको आधारमा परमेश्‍वरकाे राज्यको विषय लिई धेरै कुरा बुझाउनु हुन्थ्यो ।
प्रभुको वचन द्वारा सबै उमेरका प्रभुका जनहरुलाई तृप्ती पार्न सक्नु हुने प्रभुले उहाँलाई क्षमता दिनु भएको थियो। प्रभुको वचन बुझाउनको निम्ति मेहनत गरि गरि इतिहासिक-वैज्ञानिक तथ्यको उदाहरण लि बाईबलको वचनलाई प्रमाण दिन सक्नु हुन्थ्यो। मनिसले गरेको सबै प्रकारको प्रश्न्नको उत्तर दिने क्षमता उहाँलाई परमेश्‍वरलाई प्रदान गर्नुभएको थियोे ।
-यसरी नै उहाँले जीवनकाे अन्त्यसम्म परमेश्‍वरकाे मनपर्दो सेवा गरि रहेनु भयो । उहाँको नम्र र दिन स्वभाव, उहाँको प्रेमी अवाज : येस्तो गुण भएको हाम्रोअगुवा दनिएल बडा, कोहिको अत्मिकी बुवा, दाजु, अंकललाई गुमाउनु पर्दा, आज हामी सबैले आफैलाई टुहुराे भएको महसुस गरेको छौं । बडा सम्माहले दिनुभएको उहाँको जीवन गवाही अनुसार २६ बर्षको उमेरदेखि दानिएल बडाले प्रभुको क्रुस उठाई आफ्नो सारा जीवन प्रभुको इच्छामा सुम्पी दिनु भो र प्रभुको इच्छा पछि लाग्नु भयो , र प्रभुले उहाँलाई उहाँको काममा चलाउनु भो। येसरि नै उहाँले आफ्नो परिवरिक जीवन (बडी र दुई छाेराहरू) नि परमेश्‍वरको इच्छामा सुम्पी दिनु भयो । सारा जीवन भरी परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्दै , प्रभुको
मण्डलि र प्रभुको छोराछोरीलाई हेरदेख गर्ने चुन्नु भयो।
उहाँको कामहरुको सम्झना गर्नु पर्दा
(१) बाईबल अनुवादक : २५ बर्षा लगाएर सुधारिएको मौलिक नेपाली भाषामा बाईबल उल्था गर्नु भयो .
TBS NEPALI BIBLE ; Full Authorship Goes to Bada Daniel Rai
(२) लेखक : बाईबल परमेश्‍वर द्वारा लेखिएको पुस्तक हो भन्ने किताब र परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा लेख्नु भएको छ, हिमाल झै अचल सत्य यो अपार, चिन्ह चमत्कार र वास्तविक्ता र अन्य लेखहरु छ्न ।
Books Written by Daniel Rai & Chief Editor of Jeudo Pani
(३) गीतकार : कालेबुङ्ग एल शद्दाई बाट प्रकाशित ठुलो सियोनको गीत संग्रहमा संकलित, रचित, सम्पादित, अनूदित अनि प्रतिलिखित गरी करिबन ४०० भन्दा बढी आत्मिक गीतहरुलाई भाषिक शुद्धता, वाक्य संयोजन, लयात्मक पद रुप सजावट, गीतहरुको क्रम सूची अनि ताल मेजर, माइनरहरुमा झरिझुट सजाउने दक्ष सम्पादक थिए दानियल राई
More than 400 Psalms
(४) पुस्तक अनुवादक : बडा दानियल राई मण्डलीमा रहेर अङग्रजी, हिन्दी र नेपाली तीनै भाषामा संदेश अनुवाद र पुस्तक अनुवाद गर्नुमा नि निपुण हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भाई बख्त सिहंको लेख पुस्तकहरुलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ । बडा दानियल राईको बडीले नि भाई बख्त सिंहको जिवानी पुस्तक कसरी मैले बयान गरेर नसकिने आनन्द पाएँ नामक पुस्तक अनुवाद गर्नुभयो ।
First Book Translated By Wife of Bada Daniel Rai
(५) बिस्वका सारा नेपाली एल शद्दाई मण्डलिहरुको निम्ति उहाँ मुख्य सल्लाहकार र प्रेरितहरुको काम गर्नुहुन्थ्यो । जापान, सौउथ कोरिया, युक, अष्ट्रेलिया, होङ्कोङ, मकौउ,कतार, दुबाई, इस्रएयल,भुटान, ईन्डिया,नेपाल मलेशिया विश्व भर ठाउँहरुमा सङ्गती दिदै र मण्डलि स्थापना गर्ने क्रममा प्रभुको काम बदौउँदै लैजानु भयाे। Countries Daniel Bada Visited
Names of Some Countries Bada Used to Visit for Fellowship
– हामी प्रभुको छोरा छोरीहरु हरेक साल पैसा र समयको खर्च गरि टाढा टाढा सेवा हिड्ने गछैं ? सोही विशेष सेवामा गर्नु भएको उहाँको प्रार्थनामा बोझ येस प्रकार थियो, प्रभु हामी येस पोखरा भन्ने जग्गामा आइपुगेको छौ,धेरै टाढा टाढा भुटान, ईन्डिया र नेपालका कुना कुना बाट हामी भेला भएको छौं । हामीले खर्च गरेको पैसा पानीमा जौउस, यहाँको मण्डलिले खर्च गरेको लाखौं पैसा पानीमा जौउस तर हामी यहाँ जति आएको छौं, प्रतेकलाई आशिष दिनुहोउस । हामी आशिष को खोजी गर्दै यहाँ आएको छौं, बिन्ती तपाईंले हामीलाई आशिष दिनुहोस । हामीले प्रभुको वचन ध्यानको साथ् सुन्दै र पालन गर्दै जाउ उहाँको आगमनलाई पर्खिनदै र दिन दिने हामीमा नयापन आउस र येस द्वारा हामीले आफुमा, परिवारमा र मण्डलिमा परिवर्तन लेउन सकौ ।
बडा अशक्त भएको खबर थाहा पाए र १० तरिक अकटाेबरमा प्रभुले उहाँलाई महिमा उठाउनु भयो । म अत्यन्तै दुखित भए, र ती सेवाहरुको एकासी याद आयो, बडाले संचालन गर्नु हुँदा म उपस्थिति भएको थिए।
३) निरन्तर बाईबल पढ्नु पर्ने कुरामा पनि उहाँ जोड दिनुहुन्थ्यो : उहाँले ´लेडी जेन ग्रे `जो अंग्रेज़को मात्रै ९ दिनको रानी को उदाहरण दिदै सधैं बाईबल अध्यन गर्नुपर्ने उत्साह दिनुहुन्थ्यो। ´लेडी जेन ग्रे` ले बाईबललाई धेरै अध्यन गरेकोले बिश्वासमा बलियो हुनसके र त्येस बेला रोमन कथोलिक झुठो शिक्षालाई ग्रहण गरेन आफु प्रोटेस्टन भएकोले तर आफ्नो शिर कटी मागे र ज्यान दिए । येस्तै धेरै ब्यक्तिहरुले ज्यानको निर्दयी बने , दरिलो बिश्वासको कारण र धेरै बिश्वासि लोकको बलिदान द्वारा आज हाम्रो बिचमा पहिलो King James Bible( KJV) निस्कन सफल भयो। जुन चाहिँ बिना छल, ग्रिक बाट शुद्ध तरिकाले उल्था भई संसारकै प्रथम ग्रहणयोग्य बाईबल हुनपुग्यो । सबै अन्य भाषाको उल्था गर्ने मुल मनिन्छ KJV बाईबल लाई ।
Our Daily Temptation, Failures are the Trial exams where we prepared ourselves reading bible or don`t Where we lived our life Victory or at Loss.
करिब २०१२ साल हुनु पर्छ, म पहिलो पटक कालिम्पोङ युथ क्याम्प गएको थिए । युथ क्याम्पको दोस्रो दिन बिहान् थियो Family Prayer मा बडा दानियलले प्रभुको वचन दिनलाग्नु भो । वचन हुन अगाडि हामीले एउटा् अङ्ग्रेजी भजन (Above all powers- Above) पनि गाएको थियाैं । त्येस स्तुतिमा भएको सन्देश जुन एफिसी 1:21 वचन अनुसार परमेश्‍वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने विषयलाई बुझाउन लाग्नु भो। मान्छे जातीलाई बनाउने, अदृश्य सर्व- शक्तिमान परमेश्‍वरलाई चिन्न पाउनु कति ठुलो सौभाग्य कुरा हो हामी प्रभुमा बाचेको जनहरुको निम्ति । तर येस संसारमा अझै कयौं मनिसहरु मूर्ख बनेको छ्न जसले परमेश्‍वर सारा शक्तीलाई जानेर नि उहाँको नजिकमा औउन सकेको छैन । उहाँले इतिहाससिक/वैज्ञानिक भनाई – तथ्यलाई परमेश्‍वर वचन द्वारा स्पष्ट पार्दै प्रमाण दिनु भो। मानिस अाफैले एउटा सानाे हरियाे पात बनाउने क्षमता छैन तर परमेश्‍वरले सृष्टि गरि राखी दिएको चिजलाई थाहा पाएर घमण्डि बन्छ,परमेश्‍वर सगँ टक्कर लिन् खोज्छ । हामी मानिस जातीले गरेको पापको कारण हाम्रो साटो परमेश्‍वरको पुत्र त्येस क्रुसमा टाँगिन पार्‍यो । आज हामीले त्येस महान प्रेमलाई नबुझेको कारण परमेश्‍वरलाई भुइँमा भाचेर फालेको फुल झै अभिमानी भई अाफनै चालमा हिडदै छाैं । यी वचन औउदा, उहाँ अाफै पनि कायल बन्नु भो र एक छिन मन्द हुनलाग्नु भो, उहाँ सगँ संगै मेराे नि आसु निस्के झै बन्नपुगे । हो संसारको सबै शासन, र अधिकारि, र शक्ति र राज्‍यमाथि उहाँको अधिकार छ, र यस युगका मात्र होइन, तर आउने युगका पनि उहाँको नाम सर्बोच्च हुनेछ।
येहि प्रकारले मेरो अत्मिक खदेरी लागेको जीवनमा मैले प्रभुको असल- विस्वासीलो प्रभुको दास बडा दनिएल राईको सेवाकायको मेसेजलाई स्मरण गर्दे र उहाँको गवाही सुन्दे २ साल काटि, बिना अत्मिक खोट सकुशल आफ्नो ठाँउ प्रभुको मण्डलिमा आइपुगे।
प्रभुलाई धन्यवाद होस ।
Written Articles on 15th October 2016
Previous articleखराबी सहनेले आशिष प्राप्त गर्नेछ ।
Next articleउहाँको सुन्दरतालाई हेर्न नभुलौं
ज्ञान बढाँउनले कष्ट नि बढाँउछ . उपदेशक १ :१८
Daily Bread May 4, 2020
Spiritual Poem May 8, 2020
Paapika Lagi Prabhuji